चन्द्रागिरीको आईपीओ सर्वसाधारणका लागि जारी हुने,कति गर्ने आवेदन ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyचन्द्रागिरीको आईपीओ सर्वसाधारणका लागि जारी हुने,कति गर्ने आवेदन ?
चन्द्रागिरीको आईपीओ सर्वसाधारणका लागि जारी हुने,कति गर्ने आवेदन ?
चन्द्रागिरी हिल्सले निष्कासन गरेको आईपीओ अब सर्वसाधारणका लागि जारी हुने भएको छ । यसअघि आयोजना क्षेत्रका प्रभावित एवं स्थानीयबासीका लागि यसअघि नै जारी भइसकेको सो सेयर अव सर्वसाधारणका लागि खुला हुन लागेको हो
चन्द्रागिरीले शुक्रबार आह्वानपत्र प्रकाशन गदै सर्वसाधारणले उक्त सेयर पुस २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म भर्न सकिने जनाएको छ । चन्द्रागिरीले चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतले हुने १५ करोड ३४ लाख ९ हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको १५ लाख ३४ हजार ९ सय १० कित्ता सेयर जारी गर्न लागेको हो । यसअघि स्थानीयवासीका लागि २ प्रतिशत सेयर बिक्री गरिसकेको छ ।
आवेदकले आफ्नो डिम्याट खातासँग जोडिएको बैंक खाताबाट यस्तो आवेदन दिन सक्नेछन् । आईपीओको मूल्य १ सय रुपैयाँ हुनेछ । सर्वसाधारण समूहका आवेदकले यो सेयर लक्की ड्रमार्फत् १० कित्ताका दरले प्राप्त गर्ने निश्चितजस्तै छ । त्यसैले प्रत्येक आवेदकले १० कित्ताको लागि मात्रै आवेदन गर्दा पर्याप्त हुने अवस्था देखिन्छ ।
Previous articleराष्ट्रपति विरूद्द अमर्यादित नारा लगाउने विष्टलाइ खाेज्दै प्रहरी
Next articleकाेराेनाबाट ८ जिल्लामा शून्य मृत्यु , कुन जिल्लामा कतिजनाले ज्यान गुमाए? सूचीसहित